ITshakhuma Tsha Madzivhandila isidayisiwe, futhi | Scrolla Izindaba
ITshakhuma Tsha Madzivhandila isidayisiwe, futhi
Usihlalo weTshakhuma Tsha Madzivhandila uLawrence Mulaudzi ugcine edayise iqembu lakhe kuDitonkana Abram Sello.
UMulaudzi wathenga iBidvest Wits engasekho ngezigidi ezingama-R50 ezinyangeni ezingaphansi kweziyisithupha ezedlule waphinde wayiqamba igama elithi Tshakhuma Tsha Madzivhandila (TTM).
Kodwa manje lo somabhizinisi odabuka e-Limpopo usephoqeleke ukuthi alidayise iqembu njengoba abadlali belokhu beteleka njalo befuna amaholo angakhokhwa.
USello ungumnikazi weqembu iOlezar kwi-ABC Motsepe League e-Limpopo kanti kuyaqondakala ukuthi wakhokha izigidi ezingama-R50 ekhokhela iTshakhuma.
Ukudayiswa kwekilabhu kuvezwe kubadlali ngoMsombuluko emhlanganweni ophuthumayo obizwe ngumnikazi oshiyayo.
Kuyaqondakala ukuthi izigidi ezingama-R35 zikhokhelwe uMulaudzi kanti ezisele zibanjelwe ukukhokha izikweletu zeqembu, okubalwa nemiholo yabadlali esele.
Ngokuvunyelwa yi-Premier Soccer League, uSello kungenzeka athuthe iTshakhuma isuke e-Venda iye e-Polokwane.
NgoLwesibili umphathi obambile we-PSL uMato Madlala utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi akekho ehhovisi kodwa ubengaziswanga ngokudayiswa kweqembu.
Kulo nyaka ukwezethemba kwekilabhu kushaye kwasani kulandela nemibiko yangesonto eledlule yokuthi abadlali bebebhajwe esikhumulweni sezindiza saseThekwini.
Njengoba kukhona umnikazi omusha kusazobhekwa ukuthi abadlali bazokwenza kanjani enkundleni ngoMgqibelo.
Njengamanje iTshakhuma isezingeni eliphansi ku-log ye-DStv Premiership ngemuva kwemidlalo eyi-13. Banamaphuzu ayisishiyagalolunye ngemuva kokuwina umdlalo owodwa, badlala ngokulingana kweyisithupha baphinde bahlulwa kweminye eyisithupha.
Izinkinga zemali zivimbe nokuthi ikilabhu ingashintshi abaqeqeshi kodwa njengamanje njengoba selinabanikazi abasha, uJoel Masutha angazithola engenamsebenzi – ikakhulukazi uma ehlulwa futhi ngoMgqibelo ekuhambeni yiBloemfontein Celtic.
Igama lalowo owayengumqeqeshi weCeltic neGolden Arrows, uClinton Larsen selibalulwe njengomuntu ongahle athathe isikhundla sakhe.